Shiinaha Supermarket dukaanleyda soo saarayaasha iyo alaabada hore | Zhengcheng
Naqshadda calaamadda ee supermarket aad ayey muhiim u tahay. Waxay ku reebi kartaa aragti weyn oo ugu horreysa macaamiisha waxayna u roontahay dhismaha calaamadda waxayna markaa keentaa faa'iidooyin dhaqaale.
Zhengcheng waa shirkad soo saare calaamadeysan oo albaabka ku leh Shiinaha, kuna takhasustay soo saarida iyo naqshadeynta alaabta calaamadda sanduuqa nalka. Tan iyo markii la aasaasay shirkadda, waxaan helnay afar shati oo dhinaca wax soo saarka sanduuqa nalka ah oo loogu talagalay dukaamada ku habboon. Waxaan u fidinay badeecooyin saxiixa in ka badan 100 magac, oo daboolaya gobollo badan.
Qalabka sanduuqa iftiinka: Xaashida looxa
Magaca badeecada: Dukaanka dukaamada waaweyn
Codsi: Dukaan weyn, dukaamo, rugta gaaska, dukaan tafaariiqda, dukaanka raashinka hore
Gudaha: ku duuban filimka difaaca
Dhexe: waxaa lagu buuxiyay xumbo faaruq ah
Banaanka: sanaadiiqda kartoonka oo ku xooji xargaha alwaaxa
1. Macaamilku wuxuu bixiyaa cabbirka dukaanka wuxuuna noo sheegayaa rafcaanka. Waxaan haynaa naqshadeeye u heellan naqshadeynta sawirka calaamadda. Intaa waxaa dheer, naqshadeyntayadu waa lacag la'aan.
2. Warshadeenu waxay baaxadkeedu dhan yahay 4,200 oo mitir murabac ah, waxaana jira in ka badan 40 shaqaale ah oo mas'uul ka ah soo saarista alaabada sanduuqa nalka. Ka dib marka macaamilku amar bixiyo, si dhakhso leh ayaan u soo saari karnaa, waxaan sidoo kale la kulmi karnaa baahida macaamilka ee amarrada ballaaran.
3. Alaabooyinkayagu waxay leeyihiin muuqaal qurux badan, fiiro gaar ah u leh faahfaahinta, mana beddeli doonaan midabkooda ama haleyn doonaan 3-5 sano ka dib isticmaalkooda.
4. Xaashida looxa, tuubada hogaamisa, xabagta, astaanta aluminium iyo alaabada kale ee ceyriin ee aan isticmaalno dhamaantood waxaa cadeeyay SGS si loo hubiyo tayada iyo isticmaalka wax soo saarka.
Hore: Calaamadda sanduuqa nalka xayeysiinta
Xiga: Bannaanka hoggaanka u ah iftiinka iftiinka cuntada
Saxiix Suugaanta Supermarket
Sumadda Birta Supermarket
Sanduuqa nalka laydhka hoggaamiyey
Gudaha Ultra-khafiif ah Light Light
Sanduuqa nalka miiska ee miiska dalabka makhaayadda
Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Saxeex Farmashiyaha, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Calaamadaha Xayeysiinta, Calaamadaha Iftiiminaya,